Cationic modifier performance uye nzira yekushandisa
Cationic modifiers ndiwo macomputer neanoshanda anoshanda kubatana. Ivo anonyanya kushandiswa kudhaya kwekupfeka kwekupfeka kweselulose tambo dzakadai sedonje, rineni, uye rayon, pamwe nekudhaya nemagetsi uye akananga madhayi mubhati rimwe chete. kuita: Chitarisiko: shava mvura Ionicity: cati ...
Tora iwe kuti uzive kushandiswa kwesilicone mafuta
Dimethicone ine hwakasiyana hunhu hunoshamisa, saka yakave ichishandiswa zvakanyanya munzvimbo dzakasiyana dzeindasitiri nevekurima kugadzirwa, indasitiri yekudzivirira, tsvagiridzo yesainzi, zvekurapa nehutano nemamwe matunhu. Inoshandiswa zvakanyanya mukuvhara magetsi, kudonhedza, defoaming, damping, shoc ...
Ndeipi nheyo yemachira yekunyorovesa wicking?
Misimboti yeMachira Mvere Kubata uye Kufembedza Kupedzisa Muviri wemunhu unoramba uchisunungura mvura uye kupisa panguva yekurovedza muviri uye basa. Kunyorova kwekunyorova uye kudikitira kupedza kuendesa kupisa uye mweya wemvura pane iwo muviri wemuviri kuenda kune yekunze nyika kuburikidza nemaitiro e ...
Kushandisa uye nzira yekushandisa yemafuta ekuzora
Kazhinji mukuita kwekuruka, pre-kurapwa, nezvimwewo, zvinhu zvakawanda zvinogona kuita kuti jira racho rinzwe kunge rakaomarara, uye mafuta anodikanwa ekuvandudza manzwiro. Lubricant rudzi rwemafuta anokwanisa kupa mbatya, uye jira rinonzwa nyoro, kupfeka uye kushandisa. Zvinonakidza zvezuva nezuva zvigadzirwa zvemakemikari. Iko kuzora ...
Basa guru rekupfeka kushongedza uye kuchengetedza. Kana paine kuyerera uye kuyera kuremara, hazvingokanganisa chete chitarisiko, asi zvakare zvinokanganisa basa rekudzivirira. Semuenzaniso, kuumbwa kwemaburi ekudzikira kunokonzera kukwana kwepende firimu ukobvu, uye kuumbwa kwepini ...